Iziphethu ezishisayo ezizimele e-Outlaw Casita!
Indlu encane ibungazwe ngu-Nick & Lindsay
Ngo-118 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Woza uphumule futhi ucwilise eziphethwini zethu zangasese ezishisayo e-The Outlaw Casita! Itholakala endaweni yomlando yokugezela yesigodi yedolobha iQiniso noma Imiphumela, eNew Mexico. I-Outlaw Casita iyikhaya elincane lasentshonalanga elinekhishi eligcwele, igumbi lokugezela kanye negceke elingaphandle elicezile, kanye nobhavu wokucwiliswa wesitayela se-cowboy. Amanzi ethu ngokwemvelo ampompa esuka eziphethwini zamaminerali angaphansi komhlaba ukuze anikeze izivakashi impilo enhle nokuphumula ezikufisayo endaweni ehlala ogwadule.
Siyakwamukela ku-The Outlaw Casita! Sijabule kakhulu ukwabelana nawe ngekhaya lethu elincane lasentshonalanga eliqokwe kahle edolobheni eliwugwadule eliwugwadule eliwugwadule, Iqiniso noma Imiphumela, NM!
I-Outlaw Casita inomnyango wangasese wokungenela eyakho i-hot springs oasis etholakala amahora angama-24 ukucwiliswa emanzini kubhavu wabantu ababili.
Kukhona ikhishi eligcwele kanye negumbi lokugezela elineshawa elishisayo, ukufinyelela ku-inthanethi, i-wall unit ac/heater nakho konke okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kuthokomele, uphumule futhi unethezeke. Indawo yethu yesimanje ihlangana ne-Wild West eklanywe i-New Mexican casita ilungele izithandani noma indawo yokuhlala yasogwadule yabantu abangashadile.
Indawo yethu inomthombo wayo wakudala wamaminerali ompompa amanzi ashisayo e-geothermal aphume emhlabathini ngo-95°F futhi anganyuselwa ku-104°F ngesistimu yethu yesimanjemanje yokushisisa i-flash. Siphinde futhi sinikeze izivakashi izingubo zokugqoka, amalineni, nezinto ezibalulekile ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa lwe-soakin'!
Sibheke ngabomvu ukuthi i-The Outlaw Casita ibe yikhaya lakho kude nasekhaya ogwadule oluphakeme lwe-New Mexico lapho ungakhululeka khona, uvuseleleke, futhi ujabulele iziphethu ezishisayo endaweni ephansi yomhlaba kanye nendawo ekhululekile yokwahlulela.
I-wifi esheshayo – 118 Mbps
I-Downtown Truth or Consequences iyindawo eyingqayizivele egcwele izitudiyo ze-yoga, izindawo zemibukiso yobuciko, izitolo ezithengisa izinto ezithengiswayo, izindawo zokudlela nezitolo zekhofi kanye nezinye izindlu zokugeza iziphethu ezishisayo. Indawo yokugeza eyingqophamlando yaziwa ngezindawo eziningi zasentwasahlobo ezishisayo ongacwiliswa kuzo. Ziningi izindlela zokuhamba izintaba eduze, futhi siseduze kakhulu ne-Rio Grande kanye ne-Healing Waters Trail. Indawo yethu ingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya kuyo yonke into eku-Main Street nase-Broadway njengesitolo segrosa sendawo l, i-Geronimo Springs Museum kanye ne-Truth or Consequences Brewery lapho kunokuzijabulisa kwasebusuku nalapho abantu bendawo bethanda ukuhlanganyela.
Ibungazwe ngu-Nick & Lindsay
Sihlala isikhathi esigcwele endlini enkulu esakhiweni futhi sinesitayela sokusingatha esikhululekile, esivulekile futhi esinobungane. Ngenhlonipho sithanda ukunikeza izivakashi zethu indawo eningi ukuze zizimele, kodwa siyajabula ukusiza noma ukungenela uma usidinga nganoma yini!
Sihlala isikhathi esigcwele endlini enkulu esakhiweni futhi sinesitayela sokusingatha esikhululekile, esivulekile futhi esinobungane. Ngenhlonipho sithanda ukunikeza izivakashi zet…